Ntinye akwụkwọ njem na Hawaii bụ mkpebi ndụ na ọnwụ ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ntinye akwụkwọ njem na Hawaii bụ mkpebi ndụ na ọnwụ ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Safety • Technology • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Hotels, ebe nkiri, njem, ụlọ ahịa, na ụlọ nri na -alụ ọgụ ịmalitegharị azụmahịa na steeti Hawaii. Ndị ụgbọ elu na -agbakwunye ebe ahịa ahịa ọhụrụ maka njem maka Aloha Steeti. Azụmaahịa dị mma - mana nke a ọ bụ ozi igbu onwe ya?
Ntuli aka na -abịa. Ọ nweghị onye nọ na Steeti ahụ nwere obi ike ịtụnye ma mejupụta mgbochi ndị achọrọ nke ukwuu iji mee ka njem dị mma na Hawaii ọzọ.
Kedu akụkụ nke Hawaii adịghị mma ileta ugbu a ndị njem anaghị aghọta?
Kedu akụkụ nke “Hawaii adịghị mma maka ndị ọbịa”Ndị njem nlegharị anya anaghị aghọta mgbe ha ji akwa nhicha na -ejupụta n'ụsọ mmiri n'akụkụ Hawaii, na -eme ka ndọpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya ghara ikwe omume?
Kedu akụkụ nke "Hawaii adịghị mma maka ndị ọbịa ” ọ bụ na ha anaghị enweta mgbe ahịrị ogologo awa iji rute n'ụlọ nri bụ ihe a na-ahụkarị?
Kedu akụkụ nke "Hawaii adịghị mma ndị ọbịa ” aghọtaghị mgbe anabataghị ndị njem, ụlọ ọgwụ na -arụ ọrụ na ikike 125%, na ama ama Aloha Mmụọ apụọla?
Njem nleta ka na -aga n'ihu na Oahu, Maui, Kauai, Lanai, Molokai, na Big Island nke Hawaii, n'agbanyeghị Gọvanọ Hawaii Ige, Lt. Gọvanọ Green, onye isi CDC, na John De Fries, onye isi oche nke Ndị njem nleta Hawaii, na -arịọ ndị ọbịa ka ha ghara ịga Aloha Kọwaa n'oge a.
Ozi doro anya nye ma ndị obodo ma ndị ọbịa bụ "njem dị mkpa naanị!"
The ọnụego ọnwụ taa ibụ nke kachasị edekọ na Hawaii n'oge nsogbu COVID-19.
Ọnọdụ Coranavirus na Hawaii
N'August 24, 2020, Steeti Hawaii debara aha 169 COVID-19 ọhụrụ n'otu ụbọchị, na-akpata mgbochi na mkpọchi siri ike.
N'August 25, 2021, Steeti Hawaii debara aha COVID-625 ọhụrụ 19 n'otu ụbọchị. Naanị obere mmachi na enweghị mkpọchi mkpọchi dị.
Ọnwụ COVID-19 na Hawaii
N'August 24, 2020, ọ nweghị onye nwụrụ na Hawaii nke COVID-19. Nke a bụ n'oge oke ntiwapụ nke ọrịa.
N'August 25, 2021, mmadụ 8 nwụrụ na COVID-19 na Hawaii, ọnụ ọgụgụ kachasị elu edere na otu ụbọchị kemgbe ntiwapụ nke ọrịa.
Ndị njem ụgbọ elu
N'ọnwa Ọgọst 23, 2019, mmadụ 21,475 rutere n'ọdụ ụgbọ elu Hawaii site na ebe obibi US.
N'August 23, 2020, ọnụọgụ mbata gbadara ruo 1,700. Ọ nweghị onye gbara ọgwụ mgbochi.
N'August 23, 2021, ngụkọta nke ndị njem 23,548 rutere n'ọdụ ụgbọ elu Hawaii site na steeti iri anọ na itoolu ndị ọzọ nke US.
Ndị agụrụ ọnụ bụ ndị njem ụgbọ njem si Pacific sitere na United States ndị ọzọ na-abata na Honolulu, Kahului, Lihue, Hilo, na Kona.
N'ọnwa Ọgọst 2020, onweghị onye gbara ọgwụ mgbochi.
N'ọnwa Ọgọst 2021 ihe karịrị 70% na Hawaii nwetara opekata mpe otu ọgwụ mgbochi.
Dị ka Lt. Gọvanọ Green si kwuo, tỌnụ ọgụgụ ọnụnọ ụlọ ọgwụ na steeti Hawaii bụ ugbu a 125%. Ndị nwere nkụchi obi na ọrịa ndị ọzọ siri ike anaghịzi enweta ICU n'ihi ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị ọrịa Coronavirus.
Hawaii na -arịa ọrịa. Hawaii na -arịa ọrịa karịa mba dịka Bahamas dịka ọmụmaatụ nọ n'okpuru ịdọ aka na ntị njem Tier 4 US na -asị:
Emela njem n'oge a !
Ndị ọbịa kwesịrị igosi ụfọdụ ALOHA gwa ndị Hawaii ma nọrọ n'ụlọ.
Akụ na ụba ndị njem
Njem nleta bụ ebe kachasị ukwuu nke isi obodo nkeonwe maka Akụ na ụba Hawai'i. Na 2019, akụnụba njem nlegharị anya nke Hawaii edeela:
Venue Ego ụtụ isi steeti: $ 2.07 ijeri (+1.4%,+$ 28.5 nde YOY na 2018).
Ndị ọbịa bịara na 2019: 10,424,995.
Akụ na ụba vs. Ahụike
Onye mmeri doro anya dị ka akụ na ụba ndị njem na Hawaii. Ma eleghị anya, nke a bụ ihe ndị na-eme ngagharị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bu n'uche mgbe ha gosipụtara n'ihu ụlọ Lt. Gọvanọ Green.
Juergen T Steinmetz kwuru ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 25, 2021 na 14:55
Isi okwu bụ: ụlọ ọgwụ anyị na -arụ ọrụ na ike 125% na -enweghị akwa ICU dị. Ọ nweghị ihe dị iche onye na -ebute nje na steeti anyị. Anyị kwesịrị inwe mkparịta ụka a na mbụ.
Stuart ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 25, 2021 na 13:56
Ọ bụrụ na ị ga -ede akụkọ mkpado clickbait dị ka nke a, opekata mpe nweta ụtọasụsụ! Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ahụ ziri ezi, enweghị ihe akaebe na njem nlegharị anya nwere ihe ọ bụla gbasara mgbasa ebe a.